Paragoay: ny reny lasa mpikarakara zokiolona, ny zanaka lasa taizan-drenibe · Global Voices teny Malagasy
Mpanoratra Kurtural Nandika (en) i Miriam Kellerman, Isabelle Mcmahon, Liva Andriamanantena
Voadika ny 21 Septambra 2018 11:19 GMT
Vakio amin'ny teny English, русский, Français, 日本語, Italiano, Português, Nederlands, Ελληνικά, Deutsch, Español
(Marihina fa tamin'ny 27 Jolay 2017 no nivoahan'ny lahatsoratra teny Anglisy)
<Abuela memby>> <<zanakavavin’ny renibeny>> i Micaela Martinez. Ankehitriny efa eny amin’ny Oniversite i Micaela, ary nanakarama an’i Graciela izy mba hikarakara ny renibeny izay efa 71 taona. Mijanona any an-tranony miaraka amin’ny Renin’i Graciela kosa ny zanany vao 2 taona monja rehefa miasa manao asa an-trano sy mpanampy an-trano ao amin’ny Reniben’i Micaela izy, manohy ny sehatr’ireo vehivavy mpikarakara ny zanaky ny vehivavy hafa. Sarin’i Juan Carlos Meza nampiasana niaraka tamin’ny fanomezan-dàlan’ny tranonkala Kultural.
Nosoratan’i Maximiliano Manzoni ity lahatsoratra manaraka ity, ary navoakan’ny Kurtural voalohany tao amin’ilay andian-dahatsoratra “Ny Firenen’ireo vehivavy”
Tsy maintsy nianatra ny fomba fampiasana ny rindrambaikon’ny fifampiresahana an-dahatsary i Veronica raha vao sivy taona monja, mba nahafahany niresaka tamin’ny reniny sy nahita ny endriny niaraka tamin’ny sary manjavozavo. Toy ireo vehivavy an’arivony hafa, nifindra monina tany Espaina tamin’ny fiandohan’ny taona 2000 i Margarita, renin’i Veronica mba hiasa ho mpitaiza zaza, ary namela ny zanany niaraka tamin’ny reniny tany Asuncion, renivohitr’i Paragoay. Nanomboka tamin’izay, ny aterineto izay afaka nidirana tamin’ny alàlan’ny solosainan’ny be sy ny maro no hany fomba tokana nahafahan’izy ireo mifandray.
Niaina tao anatin’ny fahantrana faraidiny ny antsasaky ny mponina tao Paragoay tamin’ny taona 2003, ary olona an’arivony no nilahatra tany amin’ny birao fanaovana pasipaoro teo an-toerana mba hiezaka hifindra monina tany Eoropa hitady asa. Io no fifindra-monina lehibe indrindra tao Paragoay teo amin’ny tantara; tany Espaina fotsiny, nitombo 7.000 ny isan’ny mponina Paragoayana tamin’ny taona 2004, ary nahatratra nihoatra ny 82.000 izany tamin’ny taona 2009.
Vehivavy avokoa ny 70%-n’ny mpifindra-monina Paragoayana tany Espaina tamin’ny taona 2007, ary nampiasaina ho mpiasa an-trano na mpanampy an-trano ho an’ireo zokiolona na ireo olona mana-kilema ny 90%-n’izy ireo. Tahaka an’i Margarita, efa maherin’ny antsasak’ireo vehivavy ireo no manan-janaka avokoa, nefa tsy maintsy nametraka azy ireo ho karakarain’ny olon-kafa, ary nikarakara ny fianakavian’ny olon-kafa mba hanampiany ny fianakaviany.
Taizan-drenibeny i Veronica tamin’ny ankapobeny, izay antsoiny hoe <<neny>>. Nantsoiny hoe <<mama>> kosa i Margarita izay reny niteraka azy. Nizara ny satany «abuela memby» niaraka tamin’ny olon-kafa i Veronica, tahaka an’i Niurka Colman, tamin’ny toe-java-mitranga toy ny azy manokana. Taizan-drenibeny ihany koa i Niurka tany Paragoay, raha tsy maintsy nifindra monina tany Asturies tany Espaina ny reniny mba hiasa ho mpanampy an-trano ho an’ny olona iray nanana fahasembanana.
Avy amin’ny fifangaroan’ny teny Espaniola sy ny guarani ny «Abuela memby,» “zanaky ny renibeny”, ary matetika no nampiasaina tany Paraguay mba hilazana ireo ankizy toa an’i Veronica sy Niurka, izay notazain’ireo renibeny satria tsy afaka nanao izany ny renin’izy ireo fa lasa tany ivelany mba hitady asa na hianatra. Lasa endrika manandanja tao amin’ny kolontsaina tao Paragoay ireo renibe ireo, izay ahitana ireo vehivavy mifampikarakara ireo zanany.
Lasa endrika ara-kolontsaina hita amin’ireo hira malaza ny renibe, izay tranga iray nipoitra tao amin’ny kolontsaina Paragoyana nandritra ny fifindra-monin’ireo mponina ambanivohitra ho any andrenivohitra aloha, ary avy eo tany Arzantina ary taty aoriana tany Espaina. Araka ny fanadihadiana nataon’ny Firenena Mikambana, tsy fomba iray vaovao amin’ny fanabeazana ny ankizy ao amin’ity fiarahamonina ity akory izany, tsy nisy lamina na fitsipika vaovao noforonina ihany koa, fa nivoatra avy tamin’ny zavatra efa nisy tao ihany izany.
Misy ny fifanarahana ara-bola eo amin’ny reny sy ny renibe. Mikarakara ny ankizy ireo renibe, rehefa mandeha miasa lavitra ny renin’izy ireo, ary mandefa vola any amin’ny reniny izy ireo mba hanohanany ireo zanany amin’ireo zavatra ilainy. Ilaina ny fanohanana ara-bola avy amin’ireo zanany vavy, amin’ny maha –zokiolona azy ireo. Eo amin’ny sehatra nasionaly, ny fandefasana vola iraisam-pirenena no loharanom-bola efatra lehibe eo amin’ny Firenena sady ilay hany mandeha mivantana any amin’ny vahoaka.
Avy amin’ireo reny miasa nifindra-monina tany Espaina ny ankamaroan’ireo fandefasana vola iraisam-pirenena nandritra ny fihemorana ara-toekarena tamin’ny taona 2003. Izy ireo no hany loharanom-bola tokana ho an’ireo fianakaviana, nandritra ny taona maro, toa ny an’i Niurka sy i Veronica. Nanampy tamin’ny fiakaran’ny toekarena ny fidiram-bola vaovao teo amin’ny firenena tamin’ny farany. “Nahafahan’ny olona an’arivony niditra tao amin’ny tolotra ara-bola vaovao tao amin’ny firenena ny fandefasana vola,”hoy ny nambaran’i Manuel Ferreira Brusquetti, avy ao amin’ny sampandraharahan’ny hetra ao Paragoay.
Tafaverina ny reny sasany. Ny hafa kosa tsia.
Noheverina ho toy ny <<sari-monina>> ireo vehivavy nifindra monina tany Espaina, araka ny voalazan’ilay antrôpôlôgy Nicolas Granada. Ny teny hoe « mponina » (résidentas amin’ny fiteny Espaniola) dia nampiasaina tany amin’ny vanim-potoan’ny adin'i Chaco nisy teo amin’ny Bolivia sy Paragoay, ary nilazana ireo vehivavy noterena niala ny renivohitra Paragoyana, mba hiasa any amin’ny « toeram-ponenana » voatendry ho amin’izany. Niresaka ireo vehivavy tamin’izany fotoana izany i Granada mba hanasoritana ny safidy sarotra atrehin’ireo vehivavy Paragoyana maoderina : tsy maintsy nandeha izy ireo noho ny antony ara-bola ary maro no tsy tafaverina. Nitantara ny tantaram-pianakaviana izay tsy maintsy nifindra monina nankany Espaina i Granada tao amin’ny fanadihadiany mitondra ny lohateny hoe “Distances de Gua’u.”
Hita fa tena samihafa ny faripiainan’ireo vehivavy nifindra monina nankany Arzantina raha oharina tamin’ireo nifindra monina tany Espaina, araka ny nolazain’i Patricio Dobree, mpikaroka iray liana amin’ny resaka fifindra-monina sy ny asa, ary indrindra ny tsenan’ny asa an-tokantrano. Nanandanja lehibe tokoa ny fifindra-monina tany Arzantina, saingy fantatra izany fa « mivezivezy » « Izay midika fa afaka miverina mba hikarakara ireo zanany indray ireo vehivavy ireo raha misy zavatra manokana ilana azy, toy ny aretina, na ny voina eo amin’ireo ankizy na ny renibeny. »
Sarotra kokoa ny toe-draharaha ho an’ireo vehivavy nifindra monina nankany Espaina. Raha misy trangan-javatra maika na toe-javatra ilaina manokana, dia « sarotra ho azy ireo ny fiverenana noho ny halaviran-tany sy ny halafon’ny saran-dalana, >> hoy i Dobree nanazava. Mampiseho ny andiana fahasarotana samihafa ho an’ireo fianankaviany ihany koa ity fiovaovana ity.
‘Abuela memby.’ toa an’i Niurka sy Veronica ihany koa i Micaela Martinez. Ny renibeny no nitaiza azy rehefa lasa nandeha tany Espaina ny reniny. Ankehitriny efa 71 taona izao ny renibeny, ary « efa mila olona hikarakara azy » hoy i Martinez.
Nanazava ny fijalian’ny «rojom-pikarakarana » i Dobree rehefa tsy afaka miverina any Paragoay intsony ireo vehivavy ireo. Mihalehibe ireo ankizy ary lasa zatovo izay maneho ny fisian’ny andiana fahasarotana vaovao hafa indray ho an’ireo renibeny izay efa zokiolona. Miha-trotraka ara-pahasalamana ary voafetra ihany sisa ny fahafahany mampiasa vatana ho an’ireo renibe ireo arakaraka ny fandehan’ny fotoana; mendrika ny hotolorana fanampiana izy ireo, izay tena ilainy amin’izay fotoana izay, kanefa tsy mora izany.
Ankehitriny, efa mpianatra eny amin’ny Anjerimanontolo i Micaela, izy no mikarakara ny renibeny satria lasa lavitra ny reniny. Noho ny andraikiny amin’ny maha mpianatra azy, nanapa-kevitra haka an’i Graciela i Micaela sy ny renibeny mba hanampy azy ireo ao an-tokantrano sy hikarakara ihany koa. Ho an’i Graciela kosa izay manan-janaka vavikely 2 taona izay mijanona miaraka amin’ny renibeny rehefa miasa izy, ary mikatona eto indray noho izany ny faribolan’ny «abuela memby»
Nandika (fr) i Isabelle Mcmahon